Akụkọ - Osisi Kachasị Mma maka Osisi Nku
Osisi bụ ụzọ dị mma gburugburu ebe obibi nke imepụta ọkụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ejiri osisi ziri ezi na nkụ ọkụ.
Osisi anyị na-ewepụta oxygen n'ehihie site na photosynthesis na carbon dioxide n'abalị ka anyị site na osisi na-ere ọkụ anyị anaghị emetụta nguzozi nke okike ma ọ bụrụhaala na osisi ọhụrụ gbubiri site na uto ọhụrụ n'otu oge ahụ.
Osisi siri ike dị ike karịa softwoods dị ka spruce na ka ha na-etolite nwayọ, osisi ahụ enweghị obere ikuku ma yabụ ejigide mmiri. Nke a pụtara na uru bara ụba na usoro ọkụ dị elu karịa na hardwoods ruo 80% ebe softwoods nwere ike ịnwe uru calorific ruru 40%. Ihe dị elu nke calorific bara uru nke nkụ a na-esure n'ọkụ na-ere ọkụ nke ka mma ka ọ na-ewepụta okpomọkụ dị elu n'ime nkụ ọkụ ọkụ ma na-ehichapụ ọkụ na-enweghị mmetọ na ikuku anyị.
Naa ugbu a nke kacha mma n'ọhịa gị woodburning afụnwu ọkụ nwere ike zụta ma nyefee gị n'ụlọ gị na ezi uche sized quantities kpọmkwem site a osisi ugbo. Ugbo ndị a na-ahụkarị ọkachamara na osisi siri ike, igbutu na ịkụgharị n'otu oge ahụ. Mgbe igbutu osisi ahụ na-egbutu n'ime nha nke ihe ruru 300mm x 100mm ma jiri ya mee ihe site na iji usoro ihicha ọkụ Ihe nzuzo bụ ozugbo osisi a gwara ọhụrụ nọ n'ụlọ gị mee ka ọ kpọọ nkụ n'ime ụlọ ma ọ bụ tinye ya n'èzí ụlọ ahịa nke nwere ọtụtụ n'ọma ahịa.